Wargeyska Bloomber Oo Ka Waramay Inay Dowlada Somaliya Ka Hortimid Heshiisyo Ay Somaliland Iyo Puntland La Galeen Shirkado Shidaalka Baadha | Salaan Media
Wargeyska Bloomber Oo Ka Waramay Inay Dowlada Somaliya Ka Hortimid Heshiisyo Ay Somaliland Iyo Puntland La Galeen Shirkado Shidaalka Baadha
Oct 9, 2013 London(SM) – Dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay ku tilmaantay waxkama jiraan heshiisyadii ay maamulada Soomaaliland iyo Puntland la galeen shirkadaha shidaalka baadha. Wasiirka Kheyraadka dabiiciga ah ee dawlada Somaliya Mudane Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo ka qeybgalay shir lagu qabtay magaalada London kuna saabsanaa Kheyraadka Dabbiiciga ee Dalka Soomaaliya ayaa waxa uu halkaas ka sheegay goaanka Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh ee ku aadan xaquuqda Kheyraadka Dabiiciga ah iyo cida ay hoos imaaneyso, waxa uuna yidhi.
Ruqso walba oo ay maamul goboleedyada siiyeen shirkadaha shidaalka baara waa waxkama jiraan oo kasoo qaad malahan, kheyraadka dalka oo dhan shirkadaha shidaalka waa in ay dowlada Fedraalka kala xaajoodaan .”
Wasiir Cabdirisaaq waxa uu ku booriyey dhamaan shirkadihii dagaaladii sokeeye ka hor shidaalka ka baari jiray dalka ay dib u bilaabaan hawlahoodii shaqo.
“Waa in ay dalka dib ugu soo noqdaan shirkadihii ruqsada u heystay wixii ka horeeyey sanadkii 1991, marka xogaha qeyraadka soo dhameystirmaan dowlada waxa ay qorsheynaysaa sanadka 2014 ka in ay bixiso shatiyo shidaal baaris ah” ayuu sidoo kale yiri wasiirka
Wasiirka waxa uu kulankaas ka cadeeyey in dowlada Fedraalka ay ku hawlan tahay qorista sharuucda shidaalka iyo wax ka badal dastuurka kumeel gaarka dhanka kheyraadka dabiiciga ah.
Dowlada Soomaaliya gacanta waxa ay ku heysaa sidii ay u qori laheyd sharuucda kheyraadka dabiiciga ah ee dalka iyo waliba wax ka badalka dastuurka dhanka kheyraadka dabiiciga ah dhankaas waxaan la kaashaneyna baarlamaanka si uu u mel mariyo si dowlada fedraalka ay u yeelato awood kaliya kheyraadka dabiiciga ah.” ayuu si bareer ah u yiri wasiirka.
Wasiiirka waxa uu ku celceliyey in dalka uu degan yahay ayna shirkadaha ajnabiga ee shatiyada la siiyey wixii ka horeeyey 1991 ay dalka dib uga hawlgali karaan iyaga oo aan wax cabsi ah aysan ku jirin.
“Dalka waxa uu noqonayaa meel nabdoon waxaan ka dooneynaa shirkadaha ay soo noqdaan baaristoodiina ay dib u bilaabaan”
Wasiirka waxa uu rajo ka muujiyey in ay dhawaan soo afjarmi doonto khilaafka xuduuda bada ee ka dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
“Dowlada waxa ay diyaar u tahay in wadahadal kala gasho xadeynta bada u dhaxeyso dalka Kenya waxaana ku rajo weyn nahay in si nabdoon ku soo idlaado.” ayuu yiri Wasiirka.”
Shirkadaha Genel Energy Plc (GENL), Africa Oil Corp. (AOI) iyo Ophir Energy ayey Somaliland iyo Puntland siiyeen ruqsado ay shidaal uga baaraan deeganada ay ka aramiyaan inkasta oo aan hada wax baaris ah aysan ka wadin gudaha Soomaaliya.
Soomaaliland iyo Puntland ayaan wali ka jawaabin hadalka kasoo yeeray Dowlada Fedraalka Soomaaliya.
Hoosta Guji Oo ka Akhri Qoraalkan Oo English Ah